OMN: “Joohariin akka feetan balaaleeyfadhaa malee OMN amantii, kutaa fii gandaan hin yakkinaa”!! – Welcome to bilisummaa
OMN: “Joohariin akka feetan balaaleeyfadhaa malee OMN amantii, kutaa fii gandaan hin yakkinaa”!!
bilisummaa November 16, 2014	1 Comment
Haalaa hamii fii jatte jattee dhiheenya kana sabaa himaa Oromoon Jaarte (OMN) keessatti dhalaterra hogganootiin OMN miidhaa kana wal’aanuu fii dandamachiisuuf jihaa hundaan yaalaa jiru. Haa tahuu malee haga ammaa madda dhibdee rakkoon kun irraa dhalatteef kan abaaramaa jiru yoo jiraate gochaa diinatu kana dalage jedhu. Haga amma Himataa fii himatamaan rakkoo dhalattee kanaaf ummata duratti yookiin fuulletti as bahnii waan dhalatee kana soba tahuu fii dhara tahuu wanni ummataaf mirkanaawe hin jiru.
Gaafiif deebisaa Sarara paltalk bu’ureessaa fii xiinxalaa siyaasaa kan tahe Obboo Joohar Mohammed waliin taasise guutuu isaa…
Tags Ahmad Yaasiin Joohar Kadiiroo omn Oromoo
Previous “OPDOnlleen OMN keessa hojjatuuf mirga qabdi” jedhu bulchitoonni OMN
Next Seenaa Dr Ali Birraa bifa gabaabaan
Leave a Reply to falmata biyya Cancel reply